Marketing Archives | Myanmar Web Store
What is Social Media? ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာဘာလဲ? *************************** Social Mediaတှင် Media ဆိုသည်မှာ ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာပြီး ကြားခံနယ်ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ယခုခေတ်တွင် Media မှာ...
SEO (Search Engine Optimization) အကျိူးကျေးဇူးများ*************************************************** SEO (Search Engine Optimization) ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်👉လူကြီးမင်းတို့၏ website အား user များအသုံးပြုဝင်ရောက်ကြည့်မှုများပြားလာခြင်း👉ထိုနောက် new customer များ...